Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Federico Chiesa Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Anyị Federico Chiesa Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, arsgbọala, Net Worth, Web na Personal Life.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara n'ịgba ọsọ Italiantali. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Federico Chiesa's Bio.
Ndụ na ịrị elu nke Federico Chiesa.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ aka ọrụ, pacy na-arụsi ọrụ ike winger. Agbanyeghị, mmadụ ole na ole na-atụle ụdị Federico Chiesa's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Federico Chiesa Nwatakiri Akụkọ nke:
Otu n'ime foto izizi amụrụ nwata nke Federico Chiesa.
Ibido, akpọrọ ya “Pepo“. A mụrụ Federico Chiesa na 25th nke October 1997 na nne ya, Francesca Lombardi na nna, Enrico Chiesa n'obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke Genoa, northwest Italy. Ndị nne na nna Federico Chiesa nwere ya dị ka onye mbụ n'ime ụmụ ha atọ mara mma (nwoke na nwanyị).
Onye maara ihe n'egwuregwu bọọlụ bụ mba European nwere bonafide nwere agbụrụ ezinụlọ Italiantali na agbụrụ Ligurian.
O tolitere na Florence nke dị na Italytali, ya na nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ bụ Adriana na nwanne ya nwoke nke obere, Lorenzo. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke ụmụ nwanne Federico Chiesa.
Foto nwatakiri Foto nke Federico Chiesa na nwanne ya nwanyị Adriana tolitere na Florence.
N'ịbụ onye toro na Florence, Federico malitere ịkụ bọl site na afọ abụọ, nke bụ oge ọ mụtara otú e si aga ije.
Oge mbu o banye na football abughi site na enweghi egwuregwu umuaka ndi ozo iji sonye na ya ma o nweghi ebumnuche ojoo nke nne na nna ya.
Ezigbo ezinụlọ Federico Chiesa:
Ọ bụ ajụjụ banyere DNA n'ihi na Federico sitere na ezinụlọ sitere na ụlọ elu nke na-ebi ma na-eku ume bọọlụ, n'ihi ntinye aka nke nna ya - Enrico onye bụ onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara n'oge ahụ.
Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mma ịkọba na agụụ na-eto eto ahụ maka egwuregwu ahụ bụ ihe nketa ma na-azụlite nna ya bụ onye hụrụ atụmanya na ya, yana mama ya bụ onye na-ahụ n'anya na bọọlụ di ya na ndụmọdụ.
N'okpuru ebe a bụ foto dị ụtọ nke nne na nna Federico Chiesa ka ha na-egwu egwu lekọta anya ọrụ ya ịhụnanya, nlebara anya, nghọta, nnabata, oge, na nkwado ọrụ.
Zute nne na nna Federico Chiesa bụ ndị nwere nkwado dị ukwuu nye aka na ọgụgụ isi bọọlụ n'oge ọ bụ nwata.
Federico Chiesa Mmụta na Ọzụzụ :lọ Ọrụ:
Ndị nne na nna Federico Chiesa mere ka o debanye aha na US Settignanese dị na mpaghara, nke dị na Florence, dị nso na ụlọ ezinụlọ ha n'oge Federico dị afọ 5.
Ọ malitere ọzụzụ na ụlọ ọgbakọ US Settignanese mpaghara tupu ya abanye Fiorentina agụmakwụkwọ afọ atọ mgbe e mesịrị.
Mgbe ya na obere klọb na-egwuri egwu, nne na nna Federico Chiesa mere ka ọ bido gụọ akwụkwọ na International School of Florence, nke bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ kacha ochie n'ụwa na Europe.
Ihe mmepe ahụ bụ iji hụ na Federico ga-enwe ọdịnihu dị mma n'agbanyeghị ọrụ ya n'ịgba bọọlụ nwere ngwụcha obi ụtọ ma ọ bụ na ọ bụghị.
Federico mere ka ha nwee obi ụtọ site n'ịmụ ihe nke ọma na ọbụnadị gụrụ sayensị sayensị na ọkwa mahadum ọtụtụ oge.
Ọ bụ ọmarịcha ọmụmụ ihe, ọbụlagodi mgbe ọ na-egwu bọl na ọkwa Fiorentina agụmakwụkwọ.
Federico Chiesa Oge Afọ na Football:
N'agbanyeghị nke ahụ, ahụghị Federico ka ọ dị ụkọ na ịgba bọọlụ ya. N'ezie, ọ gaghị akwụsị icheta na nna ya gwara ya oge niile ka ọ zụọ 100% dịka ọ bụla ọzụzụ bụ egwuregwu n'onwe ya.
N'ihi ya, Federico na-eto eto na-ebili n'ọtụtụ nke Fiorentina dị ngwa ma kwesịkwa ekwesị n'ihi na emeghị ya ka ọ kpọọ egwu maka ịkwanyere mgbọrọgwụ bọọlụ ya ma ọ bụ aha agbụrụ. Emebere ya ka o rite ulo ya na nkwalite ya site n’inwe ike na ochicho.
Fiorentina agụmakwụkwọ bụ otu n'ime ebe ole na ole na ndụ ebe akwadoro ma ọ bụ aha nketa anaghị agụ. Naanị ihe dị mkpa bụ uru na ọ nweghị na ngalaba ahụ.
Federico Chiesa Biography - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe Federico nwere nkwekọrịta dị ịrịba ama ya na ndị otu Fiorentina n'okpuru-19 maka oge abụọ (2014-2016) maka nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na klọb na February 2016 wee mee asọmpi ya na 2-1 pụọ na Juventus.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbalịsiri ike ịchọta ntọala ya na njirimara ya. Ọbụna mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ ọkachamara mbụ ya na Europa Njikọ 1-2 mmeri na Qarabağ, a zigara Federico n'oge otu egwuregwu maka ịgba akwụkwọ abụọ.
Nke a nwere ike ịbụ, otu n'ime oge Federico Chiesa's Biography mgbe ihe siri ike.
Kacha mma ihu na football amamiihe na-eme mgbe enweghị mma n'ụdị osobo abụọ ntinye akwụkwọ.
Federico Chiesa Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Ọ bụghị ruo n'afọ na-esote, kpọmkwem na Jenụwarị 2017 na Federico hụrụ nkwụsi ike ma nwee nkwekọrịta nkwekọrịta nke ga - ahụ ya ka ọ na - aga n'ihu na - agba bọl na Fiorentina ruo na June 2021.
Onye uwe ojii bidoro ịmalite isi ihe na ịmepe goolu na Serie A maka Fiorentina n'afọ ndị sochirinụ.
O nwedịrị nke mbụ ya nwere ike iji nweta klọb na 7-1 mmeri ụlọ Rome n'oge asọmpi egwuregwu ikpeazụ nke Coppa Italia na Jenụwarị 2019.
Ọ bụ ezie na ọ dị nku, ọ gbatara okpukpu atọ ka ọ bụrụ onye ọkacha mmasị na onye egwuregwu.
Nwunye Federico Chiesa Nwunye na Kidsmụaka:
N'ịga n'ihu Federico Chiesa hụrụ ndụ n'anya, a maara ya na ọ nwere enyi nwanyị abụọ na-enweghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị (n'alụghị di) (dịka n'oge edere). Nke mbụ bụ Caterina Ciabatti, nwanyị mara mma nke ọ zutere na 2017.
N'oge na-adịghị anya ha malitere ibikọ ọnụ n'ụlọ n'otu ụlọ akụ dị na Arno na Tuscany. Ọ dị nwute na nnụnnụ ịhụnanya zuru oke yiri ụzọ dị iche iche na njedebe 2018.
Federico Chiesa bụ onye mbụ jikọrọ mmekọrịta ịhụnanya na Caterina Ciabatti.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Federico malitere ịlụ Benedetta Quagli na 2019 wee mee ka mmekọrịta ha mara site na ịbugote foto ha nwere oge dị mma na Instagram.
A na-ahụ lovebirds ahụ n'anya nke ukwuu ma enweghị ike ịchịkwa ikike ha nwere ike ịbụ ebumnuche di na nwunye dịka di na nwunye n'ọdịnihu dị nso.
Zute enyi nwanyị nke abụọ Federico Chiesa Benedetta Quagli.
Ndụ ezinụlọ nke Federico Chiesa:
Winger dị ịtụnanya bụ ngwaahịa nke ezinụlọ na-ahụ n'anya ma na-akwado. N’akụkụ a, anyị ga-ewetara gị ozi ndị ọzọ gbasara ndị ezinụlọ Federico Chiesa bido ndị mụrụ ya.
Ihe gbasara Nna Federico Chiesa:
Ex-ọkachamara football player Enrico Chiesa bụ nna Federico. A mụrụ ya na 29th ụbọchị Disemba 1970 na Genoa Italy.
Ọ malitere igwu bọọlụ asọmpi na Pontedecimo amateur club wee banye na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Sampdoria na 1989.
N'ịbụ onye a ma ama dị ka onye mgbaru ọsọ dị ukwuu, Enrico nọrọ afọ iri abụọ nke ọrụ ya na-egwu maka ndị isi Italiantali gụnyere Parma, Fiorentina na Lazio.
Papa Federico Chiesa bụ onye na-ewetara ọtụtụ klọb Italiantali nnukwu ihe mgbaru ọsọ.
Ọ kwụsịrị ọrụ ya na Figline na 2010 ma na-enwe ọ sinceụ kemgbe ezumike nká ya site na ị na-agwa ndị na-eto eto dị ka nwa ya nwoke ka ha banye na football kachasị elu.
Obi abụọ adịghị ya na Federico nọ nso nna ya nke ọ na-akwụ ụgwọ maka inye ya ndụmọdụ ọkachamara banyere mkpa egwuregwu dị mma yana ịkwanyere ndị egwuregwu na ndị na-ekpe ikpe ikpe.
Karịsịa, ọ naghị abanye etu onye winger kwesịrị igwu egwu mana hapụ akụkụ ahụ maka ndị nkuzi ya.
Enrico abughi nani nna nye Federico kama obu onye ndumodu.
More na nne Federico Chiesa:
Francesca Lombardi bụ nne Federico na onye kachasị nta nke nne na nna winger. Nke a bụ n'ihi na winger ka ga-ekwu maka ma ọ bụ zoo aka ya n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ.
N'ihi ya, a maghị ọtụtụ ihe banyere nne nke ụmụ atọ maka eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ezigbo nwunye di ya na ogidi nkwado nye ụmụ ya.
Zute nne Federico Chiesa onye ya na nwa ya nwoke mara mma na-ekpori ndụ.
Banyere ụmụnne nwanne Federico Chiesa:
Ndị otu Federico Chiesa nke ezinụlọ ya nwere onwe ya, ụmụnne ya abụọ ndị tọrọ (nwanne ya nwanyị Adriana na nwanne Lorenzo) na nne na nna.
Ị maara?… Adriana sere n'okpuru ụlọ akwụkwọ dị na Mahadum Milan - dịka nke ọnwa Febụwarị (2020) - ebe ọ na-amụ gbasara akụnụba.
Zute ericmụnne Federico Chiesa- Nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị.
N'aka nke ya, nwanne Federico Chiesa Lorenzo n'oge edere na-egwu na usoro ntorobịa nke Fiorentina ma nwee olile anya ị nweta ọfụma dịka nwanne ya nwoke mere.
Banyere ndị ikwu Federico Chiesa:
Banyere agbụrụ ezinụlọ Federico Chiesa, enweghị ndekọ banyere nne na nna ya na nna nna ya, ebe ndị nne na nna ya, ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya amabeghị nke ọma n'oge edere akụkọ ndụ a.
Ndụ Federico Chiesa nke Onwe:
Knowmaara na Federico Chiesa nwere ụdị ọrụ nke ndị mmadụ gosipụtara gosipụtara akara Zodiac bụ Scorpio? Ọ bụ nwoke nwere oke mmasi, onye nwere ọgụgụ isi, onye pụtara ìhè ma na-arụsi ọrụ ike.
Tụkwasị na àgwà nke Federico Chiesa's persona bụ onye ọ dere maka ịghara ikpughe ọtụtụ ihe gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Mmasị onye ahụ na-enwe mmasị na ya gụnyere agụmakwụkwọ, igwu egwuregwu vidio ma soro ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Hụ ihe ọ na-eme maka ezumike.
Ndụ Federico Chiesa:
Banyere otu Federico Chiesa si eme ya ma na-emefu ego ya, o nwere atụmatụ ruru $ 2 nde n'oge edere akụkọ ndụ a.
Iyi nke akụnụba winger sitere na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta site na ịgba bọl elu-elu.
Onye winger na-enwetakwa nnukwu ego site na endorsements. Dịka, ọ nweghị nsogbu na-agbagharị n'ụgbọala ndị mara mma ma ọ bụ ibi n'ụlọ na ọnụ ụlọ dị ọnụ ala na Italytali.
Nke a bụ foto na-adịghị ahụkebe nke ọgụgụ isi nke football na supercar nke anyị maara obere.
Eziokwu Federico Chiesa:
Iji kwụsị akụkọ nwata anyị Federico Chiesa na akụkọ ndụ anyị, ebe a amachaghị banyere ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere winger.
Eziokwu # 1 - Mmebi ụgwọ ọnwa:
Kemgbe ọ gbabara n'ọgba bọọlụ klọb, enwere mmasị na ego Federico Chiesa na-enweta.
Eziokwu bụ, tya na ndi Italia na ACF Fiorentina huru ya ka o na etinye ego buru ibu €Nde euro 3.1 kwa afọ.
Miralem Pjanic Child Story Story Na-emeghe Ihe Nkọwa
Ihe ijuanya dị n'okpuru ebe a bụ ụgwọ ụgwọ ọnwa Federico Chiesa kwa afọ, ọnwa, ụbọchị, oge elekere, nkeji na sekọnd (dị ka n'oge edere).
Nweta ego na Euro
Nweta ego na paụnd
Ego na USD
Kwa Afọ € 3,100,000 £ 2,600,000 $ 3,498,815
kwa ọnwa € 258,333 £ 216,667 $ 291,568
Kwa Izu € 59,615 £ 50,000 $ 72,892
Kwa .bọchị € 8,493 £ 7,123 $ 10,413
Kwa elekere € 354 £ 297 $ 433.9
Kwa Nkeji € 5.90 £ 4.95 $ 7.2
Sekọnd € 0.10 £ 0.08 $ 0.12
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Federico Chiesa'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Wao !. Ị maara?… Nwoke n’etiti needstali kwesịrị ịrụ ọrụ opekata mpe 1.6 afọ irite € 50,000, nke bụ ego Federico Chiesa na-enweta n'otu ọnwa.
Eziokwu # 2 - okingokingụ Sịga na Mmanya:
Onye winger anaghị a drinkụ ihe na-enweghị isi, ọ nweghịkwa nsogbu ahụike sitere na ịse anwụrụ. Ọ bụ onye okpukpe karịa ịnọgide na-ebi ndụ dị mma maka ọdịmma ya kachasị mma na football.
Eziokwu # 3 - FIFA Rankings:
Federico nwere ihe na-erughị afọ 5 na-egwu bọl na-agba elu, mmepe nke na-akọwa ihe mere o ji nwee ọkwa FIFA dị ala nke 78.
Ọ bụ eziokwu a maara na oge na-agwọ ma na-aka mma. Ikpe ahụ agaghị adị iche maka winger onye nwere ikike nke iru ogo 85.
Anyị ga-enwekwu obi ụtọ ịhụ ka ọ na-ebi ndụ kwekọrọ na ọkwa ahụ.
Eziokwu # 4 - Okpukpe:
Ọ dị ka Federico Chiesa Ezinaụlọ na-ekpe okpukpe Kristian. Otú ọ dị, onye Italian ahụ n'onwe ya apụtaghị n'ihu ọha iji kwupụta okwukwe ya n'oge a gbara ajụjụ ọnụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, nsogbu anyị na-akwado ya ịbụ Onye Kraịst dịka ọtụtụ ndị oftali.
Eziokwu # 5 - egbugbu:
Federico Chiesa nwere ezigbo mma nke 5 ụkwụ, 9 sentimita asatọ na enweghị ntụpọ mara mma. Agbanyeghị, ọ nweghị egbugbu n'oge a na-ede akwụkwọ, ọ ga-abụ na ọ naghị atụgharị uche n'echiche inweta nka.
O yiri ka ọ na-ele anya ka ọ dakọtara na karịa ihe ndekọ nke nna ya nke na-enweghị egbugbu n'oge ọrụ 2-afọ iri na football.
Dị ka nna dị ka nwa: n't gaghị ekwenye? Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu # 6 - Onye ọ na - asọpụrụ ma nwee mmasị na ya:
Nke ikpeazu nke Federico Chiesa bu eziokwu bu okwu banyere onye o na-efe n’anya ma nwekwaa obi uto. Ị maara?… winger tolitere na-atọ ụtọ akụkọ Brasili Ricardo Kaka dị ka dike nwata ya.
Onye uwe ojii a na-amasịkwa ndị ya na ha dịkọrọ ndụ Leroy ama ama na Kevin de Bruyne maka ụdị etu ha si egwu ọrụ ha na Manchester City.
Federico Chiesa Biography Nchịkọta:
Federico Chiesa Biography Eziokwu (Wiki)
Aha n'uju: Federico Chiesa
aha otutu: Pepo
Ofbọchị ọmụmụ na afọ: 25 Ọktoba 1997 (afọ 22 dị ka ọnwa Machị 2020)
Ebe amụrụ onye: Genoa, .tali
Ndị nne na nna: Francesca Lombardi (mama) na Enrico Chiesa (Nna)
Ụmụnne: Adriana (nwanne nwanyị nke nta) na Lorenzo (nwanne nwoke nke obere).
Nke bụbu nwaada nwanyị: Caterina Ciabatti (seperated na 2018)
Nwata nwanyi a: Benedetta Quagli (bidoro ịlụ n’afọ 2019)
Okwa oru :: Onye na-agba ya (Winger)
elu: 1.75 m (5 ft 9 na)
Mmụta Bọọlụ Bọọlụ: US Settignanese, Florence, Italy.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Federico Chiesa Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ akụkọ Fiorentina
Dusan Vlahovic Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Luis Muriel Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Udeo Biography Eziokwu